Teams erfolgreich führen - ohne disziplinarische Vorgesetztenfunktion - နောက်ဆုံးရသတင်းများ 24
ကျွန်ုပ်တို့၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုသင်ကြား Alia လေ့. in den Bereichen effektive Führungstechniken, Konfliktmanagement und Führungskompetenzen.
06.-07.03.2018 မြူးနစ် & Frankfurt
29.-30.05.2018 စတုဂတ် & ဟမ်းဘတ်
tag ကို 1
tag ကို 2
+ S က&P Führungs-Test “Führungskompetenz: Bestimmen Sie Ihren Führungsstil”
+ S က&P-Test: Eigene Kommunikations-Stärken einschätzen
+ S က&P Test “Wie ist Ihr Delegationsverhalten?”
+ S က&P Test “Feedback-Fähigkeit”
+ S က&P Leitfaden “Konflikte erkennenund auflösen”
Informieren Sie sich jetzt über unsere weiteren Seminare zum Thema လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း & ဆက်သွယ်ရေး!
မော်ကွန်းတိုက် လကိုရွေးချယ်ပါ June 2018 (388) May 2018 (713) April 2018 (721) မတ်လ 2018 (735) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 (755) ဇန္နဝါရီလ 2018 (757) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (645) နိုဝင်ဘာလ 2017 (805) အောက်တိုဘာလ 2017 (760) စက်တင်ဘာလ 2017 (674) သြဂုတ်လ 2017 (690) ဇူလိုင်လ 2017 (314) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (1)